နေတိုးစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုမတိုင်မီ ပင်လယ်နက်အတွင်း အမေရိကန်ဖျက်သင်္ဘောကို ရုရှားလိုက်ပါစောင့်ကြည့် - Xinhua News Agency
နေတိုးစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုမတိုင်မီ ပင်လယ်နက်အတွင်း အမေရိကန်ဖျက်သင်္ဘောကို ရုရှားလိုက်ပါစောင့်ကြည့်
မော်စကို ၊ ဇွန် ၂၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ယူကရိန်းနိုင်ငံနှင့်အတူ နိုင်ငံပေါင်းစုံပါဝင်သော စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခု မစတင်မီ ရက်ပိုင်းအလိုတွင် ပင်လယ်နက်အတွင်း ချဉ်းကပ်ဝင်ရောက်လာသော အမေရိကန် ပဲ့ထိန်း-ဒုံးကျည်ဖျက် စစ်သင်္ဘော Ross ကို ၎င်း၏ ပင်လယ်နက်ရေယာဉ်အုပ်စုက လိုက်ပါစောင့်ကြည့်နေကြောင်း ရုရှားနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ဇွန် ၂၆ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။Arleigh Burke-class အဆင့်အတန်း Ross ပဲ့ထိန်း-ဒုံးကျည်ဖျက်စစ်သင်္ဘောသည် လာမည့် ရက်သတ္တပတ်အတွင်း စတင် ပြုလုပ်မည့် Sea Breeze 2021 ရေတပ်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွင် အခြားသော စစ်သင်္ဘော ၃၁ စင်းနှင့်အတူ ပူးပေါင်းပါဝင်လေ့ကျင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံ အမှတ် (၆) စစ်ဗျူဟာရေတပ်အုပ်စုက ဇွန် ၂၆ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုနှစ်အတွက် အဆိုပါ ရေတပ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ်တွင် Ross ဖျက်သင်္ဘောပါဝင်လေ့ကျင့်ခြင်းမှာ “ယူကရိန်းအတွက် အမေရိကန်၏ ထောက်ခံအားပေးကို အစစ်အမှန် ဖော်ကျူးပြသမှုတစ်ခု” ဖြစ်ပြီး ပင်လယ်နက်အတွင်း အဏ္ဏဝါရေပြင်လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ရန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နှင့် မြောက်အတ္တလန္တိတ်စစ်မဟာမိတ်စာချုပ်အဖွဲ့(နေတိုး) တို့အကြား ကတိကဝတ်အား ပိုမိုခိုင်မာစေရန် လုပ်ဆောင်သည့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်း ဖြစ်ကြောင်း ယူကရိန်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံရုံးအကြီးအကဲ Kristina Kvien က ဆိုသည်။
သို့သော်လည်း ရုရှားနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Maria Zakharova က နေတိုး-ယူကရိန်း ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု အစီအစဉ်သည် ရုရှားနိုင်ငံနယ်စပ်အနီး မတည်မငြိမ်ဖြစ်ပေါ်အောင် “အဆုံးမသတ်နိုင်သော” အကြောင်းတရား ဖြစ်စေကြောင်း နှင့် ယူကရိန်းနိုင်ငံသို့ လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်များ ပေးပို့နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဇွန် ၂၆ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။(Xinhua)
Russia monitors U.S. destroyer in Black Sea before NATO drills
MOSCOW, June 26 (Xinhua) — The Russian Defense Ministry said Saturday that its Black Sea Fleet was tracking the U.S. guided-missile destroyer Ross, which entered the Black Sea earlier in the day foramultinational exercise with Ukraine.
The Arleigh Burke-class destroyer will join 31 other ships to participate in the maritime portion of Exercise Sea Breeze 2021 starting next week, the U.S. Navy 6th Fleet said on Saturday.
Ross’ participation in this year’s drills is “a tangible demonstration of U.S. support for Ukraine” and part of the enduring commitment made by the United States and the North Atlantic Treaty Organization (NATO) to enhance maritime security in the Black Sea, said Charge d’Affaires Kristina Kvien, U.S. Embassy in Ukraine.
However, Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova said on Saturday that the NATO-Ukraine drills are aimed at causing “endless” destabilization near the Russian borders and transferring weapons and equipment to Ukraine. Enditem